त्रिशूली नदीमा परेर हराएकामा सचिवको शव फेला
बिहिबार, ०३ माघ २०७५
माघ २७, २०७४ BNNTV
धादिङ, २७ माघ – नेपाल सरकारका सिँचाइ सचिव रामानन्द यादव चढेको बा २ झ ३१४० नं को जीप बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–३ सलाङघाटबाट आज बिहान त्रिशूली नदीमा परेर हराएकामा सचिव यादवलाई मृतावस्थामा फेला पारिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी गोताखोरको टोलीले उहाँको शव पानीबाट बाहिर निकालेको हो । बेपत्ता भएका उहाँका छोरा र एक किशोरी भने अझै भेट्टिएका छैनन् । जीपलाई डोरीले बाँधेर अड्काइएको प्रजिअ श्याम भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
नारायणघाटबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको जीपमा मन्त्रालयका सचिव यादव, उहाँका छोरा सञ्जय र एक किशोरी सवार थिए । चालक निराजन यादव भने घाइते भएका छन् । बेपत्ताको खोजी भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीका प्रहरी निरीक्षक सञ्जय तिमिल्सेनाले जानकारी दिनुभयो । घाइते चालकलाई उद्धार गरी उपचारका लागि काठमाडौँ पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ । (रासस)
प्रकाशित : शनिबार, माघ २७, २०७४१०:५४
मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा अमरेशको मृत्यु !
क्रसर उद्योगको दर्ता गर्न सिफारिस गरिदिने भन्दै लाखौ घुस माग्ने बिरुद्ध मुद्दा दायर !
जापान रोजगारी अपडेट : द्विपक्षीय छलफलले यसरी पाउँदैछ तीव्रता !
१ घण्टा अगाडि रासस
एन्सेल र नेपाल टेलिकमलाई सीजी टेलिकमले टक्कर दिन नपाउने ! यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश !
पाहुना लाग्न काठमाडौँ आएका एक भारतीय नागरिककोको खाटमै मृत्यु !
२ घण्टा अगाडि रासस
इँटा उद्योगको पर्खाल भत्कँदा घाइते भएका दुई बालबालिकाको अस्पताल नपुग्दै मृत्यु !
नायिका ऋचा शर्मालाई हार्ट अट्याक ! आइसियूमा भर्ना !
“नेपालमा ठूलो दुर्घटना र चलखेल हुनबाट डा केसीले जोगाएका थिए”
३ घण्टा अगाडि रासस
३ दिन अगाडि पत्रपत्रिका
हातबाट खसेको मोबाइल पड्किँदा ७ वर्षीय बालकको मृत्यु ,आमा गम्भीर घाइते !
साप्ताहिक राशिफल : पुस २७ देखि माघ ३ गतेसम्म तपाईका दिन कस्तो रहला ?